Miandrandra an’ireo Raiamandreny ny olona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Miandrandra an’ireo Raiamandreny ny olona
Ny Ekipa il y a 6 années
Miandrandra hafatra avy amin’ny Raiamandreny Eveka ny olona sasany. Taratasain’ny Eveka iriana hanazava ny saina sy hankahery ny tsirairay anatin’izao vanim-potoana sarotra diavina izao.
Mivory ara-potoana ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara ( www.ecar-mada.mg/ ‎). Hifarana ny zoma (rahampitso) 15 novambra izao izany fivoriana ara-potoana izany. Fivoriana fanao isaky ny volana novambra tahaka izao. Fivoriana handraisan’ireo Eveka ny tatitry ny asa avy amin’ireo fikambanana masina sy ny firohotana isan-tsokajiny. Fivoriana ifampizaran’izy ireo ny vaovao momba ny fiainam-piangonana any amin’ny diosezy tantanin’izy ireo tsirairay avy. Fotoana hanasany manam-pahaizana isan-tsokajiny. Fivoriana handinihan’izy ireo ny fiainam-pirenena na dia tsy io aza no fototry ny fivoriana.
Matetika aorian’ny fivorian’ny Eveka tahaka izao dia misy ny hafatry ny Raiamandreny ho an’ireo zanany sy ireo olona tsara sitra-po. Maromaro ireo olona maneho ampahibemaso ny fanantenany fa hisy io hafatra io ary ho voarakitra anatin’ny “Taratasin’ny Eveka”. Manantena ireo olona ireo fa hiompana bebe kokoa amin’ny fiainam-pirenena izany hafatra izany. Misy amin’ireny olona ireny no zanaky ny Fiangonana. Misy ny olona ivelan’ny Fiangonana. Misy ihany koa ireo mpanara-baovao zary misaka lela.
Milaza fahatokisana ny Eveka ny fisian’ny feo miantso. Azo raisina ho zava-tsoa ho an’ny Fiangonana izany. Azo heverina koa ny fisian’ny feo miantso ho toy ny “zaza latsaka andavaka” ny olona ka ny feo sisa fitaovana ilazana fa mbola ao e.
Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Efa mby ankoditra ny fahasahiranana sy ny fahantrana. Miantraika amin’ny isan-tokantrano izany. Hita eny anivon’ny fiarahamonina. Manjaka ny gaboraraka. Mandry tsy lavo loha ny olona na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Amin’ny fotoana nanoratana an’izao matoan-dahatsoratra izao dia re fa notafihan’ny jiolahy mirongo basy aman-tsabatra ny ivontoerana fitaizana olona sembana. Nankaiza ilay fanahy nambara hatrizay fa mampiavaka ny Malagasy ? Resabe sisa izany raha ny zava-misy iainana isan’andro no tantaraina.
Azo antoka fa nandre ireo zava-manjo ny mpiara-belona ireo Eveka. Tsisy toerana fady izany intsony. Misy tokoa ny fonenan-dry masera no tafihan’ireo jiolahy. Na ny aty amin’ny tanan-dehibe na ireo miasa any ambanivohitra. Tsisy manana antoka fa tsy ho voatafika izany. Na kilemaina na vehivavy, na mahantra na mpanan-karena. Firifiry ireo mpiambina no maty teo am-piarovana ny toerana niasana. Firifiry ireo mpitandro filaminana no lavo amperinasa.
Endriky ny fahasimban’ny rivotra na aera iainana ankapobeny izany. Mahita ireo olona sasany lasa mpanefoefo tampoka va re ireo olona sasany ka manary ny fahendren-drazana sy manadino ny fanabeazana nozarain’ireo olobe sy ny Fiangonana ? Ekena fa misy tokoa no tsy hita fototra ny harena. Misy ny harena tsy nisasarana. Mihevitra ireo jiolahy fa misy ny tsy maty manota. Mitarika azy ireo haka tahaka izany. Fanazavana izany fa tsy fanamarinana fihetsika. Ny asa ratsy dia ratsy na inona antony nanosika izay nanao azy.
Miandrandra fanilovana ny mpiara-belona izay miandry ny hafatry ny Eveka. Hanana akony manokana ny fampitana ny hafatra amin’ity taona ity satria misy ny fotoam-pivavahana lehibe ho tontosaina eo amin’ny tokontanin’i kolejy Masina Misely ao Amparibe Antananarivo. Fotoam-pivavahana hamaranana ny taonan’ny finoana. Ireo Eveka no hitarika ny lamesa.
Miandrandra fanilovana ny sain’ny olom-pirenena hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ary miara-dalana amin’izany ny fifidianana izay ho depiote. Adidy roa tontosaina anatin’ny andro iray amin’ny 20 desambra.
Ankoatra ny fanilovana ny sain’ny vahoaka dia eo koa ny hafatra mikasika ny fampihavanana. Adidy mipetraka eo amin’ny Fiangonana hatramin’izay izany fa tsy asa vaovao akory. Manana ny toerany manokana amin’izao fotoana izao noho ny vanim-potoana lalovana ara-politika.
Tahaka ny olam-piainana rehetra atrehana dia tsy manana lakile majika amin’izany ny mpitondra Fiangonana. Mahalala an’izany ireo olona mitodika aty amin’ny Raiamandreny Eveka. Tsy manakana azy ireo hanantena anefa izany ary hiantso fandraisam-pitenenana. Samia ho velon’aina hahafantatra izay hafatra ary e.